နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ မနေ့က အဖြစ်အပျက်တွေဆီ ငါ့ကို ဖုန်းလှမ်းခေါ်ခွင့်ပြု ထုံးစံအတိုင်း ရထားတစ်စင်း တဂျုန်းဂျုန်းတဂျက်ဂျက်နဲ့ အမြီးတရမ်းရမ်း တတူတူအော်မြည်သံပေး ငါ့ဦးနှောက်ခန်းထဲမှာ လှည့်လှည်ခုတ်မောင်းစဉ် အခိုက်အတန့်ကာလများ ရာသီဥတုက ဆယ်ယီရယ်လစ်ဇင်လိုလို မက်ဂျီကယ်ရီယယ်လစ်ဇင်လိုလို ငါမြင်ရတဲ့ အရောင်တွေက ဗန်ဂိုးလား မွန့်ခ်ျလား ဒါလီလား အဝေးမှာ အလွမ်းတွေ တဖွဲဖွဲရွာလို့ကောင်းနေတုန်း လက်ထဲက နှလုံးသားကို ၀ုန်းခနဲ ဆွဲဖွင့်ဆောင်းတော့မှ မီးပွားအစက်အပြောက်တွေထဲ ငါအေးစက်သွားတာ မြက်ပင်ရှည်ရှည်လွင်ပြင်တစ်လျှောက် ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ မြက်သီးတွေ ငါထိစမ်းပွတ်သပ်နေမိခဲ့သလား မပီပြင် ၀ိုးတ၀ါး အငွေ့အခိုးဆန်ဆန်ဒြပ်သားထုကြီးထဲ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် ငါမြုပ်နစ်ပြီးရင်း မြုပ်နစ်ကျွံကျသွား အနက်ရှိုင်းဆုံးထိတိုင် ပေါ့ပါးလွင့်ဝဲလို့ တဂျစ်ဂျစ်ကုတ်ခြစ်သံကြားမှ အိပ်ယာထဲကနေ အလူးအလဲ ငါ့သက်ဝင်နိုးထမှုဖြစ်စဉ်က အခြားသက်ရှိတွေလိုပဲ ထူးမခြားနားပတ်ပျိုး ဘ၀အဓိပ္ပါယ် သိမှုမရေရာ လူအဖြစ်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းက တစ်စုံတစ်ရာ အနှောင်အဖွဲ့မလွတ်ကျွတ်သေးသမျှ ရုန်းထွက်ဖို့ သံသရာအဖန်ဖန် ကြံစည်စိတ်ကူး လည်ပတ်နေရဦးတော့မှာကို သိသိကြီး မိုက်တွင်းနက်နက်လာ ဘူတာစဉ်တွေ အထပ်ထပ် တောအုပ်တောင်တန်းပင်လယ်ရေပြင်ပြာပြာတွေ ငါ့အညှိတက် ဓားမြောင်တစ်လက်ရဲ့ မပြောင်လက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းသန်းပေါင်းများစွာထဲမှ ဖြစ်နိုင်ချေပွုင့်သေးသေး ပိစိနှောက်တောက်လေးတစ်ခုခုနဲ့ လာငြိစွန်းလို ငြိစွန်းငြား တင်ကူးကြံရွယ်ကြိုးစားကြည့်ခြင်းမျှသာ ရာသီခွင်စက်ဝိုင်းဟာ နဂါးခေါင်းဘယ်ဖက်လှည့်မလှည့်ဆိုတာအစ ငါနဲ့ဆိုင်သော်ရှိ မဆိုင်သော်ရှိ ဝေ့လည်ကြွက်ပတ် ကြွက်လည်ပတ်ဝေ့ စက္ကူပြောင်သက်သက်ထက် ပိုကောင်းအောင်တော့ အားထုတ်ဖို့ ဆိတ်ဖလူးနံ့လေးတသင်းသင်းကို ငါ့လိုင်းတွေထဲ မြှပ်နှံအကွက်ရိုက်ထားလည်း ဘ၀ဆိုတာ ဗဟိုချက်ရှိယောင်ထင်မှတ်မှုများ အာသာပြေကောက်လှန်လိုက်ရုံ အရည်စိုပြီး တစ်ခဏအတွင်း အရည်မလာတော့လို့ ဖြစ်သလို ကောင်းလိုက်ရခြင်း ရေပျောက်မီးပျောက်ဖြစ်ဖြစ် ငယ်သံ ပါအောင် ကြီးကောင်ဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ဖြစ် ငါ့လျှာတွေက အတောင်ညောင်းတဲ့ထိ အရသာကို ငတ်ငတ်မွတ်မွတ် တောင့်တအပ်၏ မအပ်၏ အပ်ပေါ် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပဲကျကျ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပေါ်ပဲ အပ်ကျကျ နံရံပေါ်က အင်္ဂတေတွေ အချပ်လိုက်ကွာရုံနဲ့အားမရတော့တဲ့အခါ ငါ့ကမ္ဘာဟာ ပျက်စီးသွားတော့တာပဲ ကွယ်တို့ရယ်။ ။ လွန်းဆက်နိုးမြတ် ၁၁.၁၁.၁၁ နံနက်၀၂း၀၀နာရီ
Posted by ဇာဇာ at 2:11 PM No comments:
တွန့်ခွေခွေ စွတ်ကြောင်းရာအတိုင်း နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲ မီးတောက် ပြာနှမ်းနာကျင်ခဲ့ရတယ်
ဟင်းလင်းပြင်ကျယ်ပန်းချီကားထဲ သစ်ပင်နည်းနည်း တောင်နည်းနည်း တိမ်နည်းနည်း
ပြီးရင် အမှောင်နဲ့ရောပြီး ချိုးကူသံလေးအစေးကပ်အောင် လက်နှစ်ဖက်ကို လေယာဉ်ပျံသဏ္ဍန်
လေထုမှာ ဝဲဆန့်ကြည့် အမှေးပါး မကြာခင် ပေါက်ကွဲအက်ထွက်လာမယ့် ကမ္ဘာသစ်ရဲ့
ပျဉ်းမပန်းတွေ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာ သစ်ရွက်ကြွေပေါ်က နံပါတ်စဉ်အတိုင်း လက်နှစ်ဖက်ကို
သာသာဖွဖွ ဖက်လှဲတကင်း ပွတ်သပ်ချော့မြူဆော့ကစားစဉ် လက်ဖ၀ါးအောက်မှာ
ကြားလား ကြားရဲ့လား ကြားကြရဲ့လား ညလေအေးလေး လွင့်လွင့်ဖြူးဖြူးအမြင့်ပျံနေတယ်
ရှင်းမပြချင်ဘူး ထင်ချင်သလိုသာ ကြားလိုက်တော့ မြင်ချင်သလိုသာ မွှေးလိုက်တော့
မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ပြုရမှာပဲ
ပျော်ရွှင်မှုအတုတွေနဲ့ ချုပ်ရိုးချုပ်သားမခိုင်ခံ့ကြောင်း နိဂုံးအဆုံးသတ်ထားတာ
ရှတတ်မှ ဓားလို့ခေါ် ကိုးတတ်မှ ကျမ်းလို့ပြော နေမ၀င်ခင် နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့တယ်
အတတ်နိုင်ဆုံး သစ်ရွက်ထိပ်ဖျားမှာ ဟီးလေးခိုနိုင်သမျှခိုနေမယ့် မိုးရေစက်
စက် ။ ။
ည ၁၁း၂ဝ နာရီ
Posted by ဇာဇာ at 2:21 PM No comments:
နှလုံးသားက အဲဒီ့အရာကို အကြိမ်တစ်သောင်းမြောက် သွားကန်ကျောက်မိတယ်
ဘယ်မူလီနဲ့ သွားကျပ်လို့ အထာကျနိုင်တော့မှာလဲ ကမ္ဘေ ကမ္ဘာက အရှုပ်ထုပ်တွေ
လူကုန်ကူးခံရရှာတဲ့ ကံဆိုးမလေးသွားရာနောက်ကို သောက်ချီးထုပ်ကောင်က မိုးကို
အတင်းလိုက်ရွာခိုင်းတယ် ကျိန်ဆိုရွယ်စူးပြောမယ် ဒဏ္ဍာရီထဲက လှံနဲ့ထိတဲ့ ဒဏ္ဍာရီထဲက
သံပုရာသီးချိုတယ် ပိုက်ဆံမအိပ်ဘူး ကောင်မလေးကပဲ ပိုက်ဆံအတွက် အိပ်လိုက်တယ်
ဘုရားသခင်ဟာ အပြန်မှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သွားတယ် တစ်ခုခုလည်း လုပ်ပြသွားတယ်
လက်ခလယ်ကိုထောင်ပြသွားတာများလား ဒီလောက်တော့ ပေါက်ပါတယ် ကျောက်တုံးဟာ
အချိန်ပြည့်တော့ ကျောက်တုံးဖြစ်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး မျှော်စင်လည်း အလားတူ သတ္တုအစ
အနတစ်ခုခု ကြမ်းပြင်ပေါ် အရှိန်နဲ့ ထိခတ်သွားတယ် အဲဒီ့အသံက နားထဲ လာရှပြီး သွေး
တစ်စက်စက်ပန်းထွက်လာတယ် ပြူးကျယ်ကျယ် မျက်လုံးတွေ ကြောင်တောင်တောင် နာမည်
မေးမရ အတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားမရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မမှတ်မိ(ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလ
လမ်းထောင့်) သုံးပြီးသား နို့ဆီဗူးခွံပြောင်းပြန်လှန်ပြီး အပေါ်က ဖယောင်းတိုင်ထွန်းလက်စ
ဟုန်းဟုန်းလည်း မတောက်ချင်ဘူး ဖွေးဖွေးလည်း မလှုပ်ချင်ဘူး ရုပ်သေးရုပ်လေးမှာသာ
တံတျာတေရှင် တံတျာတေရှင် တံတျာတေရှင် အထပ်ထပ်ကျော့ အကြိမ်ကြိမ်ပွားများ ဗလာ
မပါကံစမ်းမဲ ခြစ်လိုက်တဲ့ နေရာက ပွန်းပဲ့လာမယ် သွေးစို့လာမယ် ထာဝရမှောင်နေတဲ့
ကြယ်တံခွန်တွေ အိပ်ယာခင်းအသစ်မလဲခင် ဖြုတ်ဆေးရဦးမယ် စာသားက သံစဉ်နဲ့မဆန့်လို့
သီချင်းဟာ စုတ်ပြဲသွားတယ် တကတည်း ကျွန်းသစ်လောက်မှ မပျဉ်းကတိုးဘူး ဟိုဟိုဒီဒီ
ယောက်ယက်ခတ်ပြေးလွှားရင်း စွမ်းသလောက် အလင်းပေးလိုက်သေးတယ် အဲဒီ့မင့်ဖင်လေး
ကို ချစ်တယ်ပိုးစုန်းကြူလေးရယ် တစ်နေ့တခြားရှည်ရှည်ထွက်လာနေတဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့
အစွန်းတရားတွေအတွက် အစွန်းချွတ်ဆေးဝယ်ပါ မ၀ယ်ချင်လည်း မ၀ယ်ပါနဲ့ ဆေးလိပ်ပြာခွက်
ထဲမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေက ပြာဟောင်းမှုန့်အကြွင်းအကျန်တွေ လွမ်းမောစရာ အမွှေးအမှင်တွေ
လည်း တစ်ကိုယ်တော် ခပ်တည်တည်ထူထပ်ခဲ့တာ ထိုစဉ်က ဘ၀ဟာ မိုးပက်လို့ နွားလှည်းဘေးမှန်
ချမရဘဲ ပထမတော့ ရင်ကျပ် နောက်တော့ မြန်မာဗွီဒီယိုကားတွေထဲကလို ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ
သွေးတွေဘာတွေပါလာ ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာကြွေခွက်ထဲ ခေါင်းစိုက်ပြီး မြိုစို့ထားခဲ့သမျှပြန်အန်ချလိုက်
တော့ ငါးမျှားချိတ်တွေထွက်ကျလာတယ် အဲဒီ့တော့မှ ဆယ်နှစ်လုံးလုံးအမျှားခံခဲ့ရမှန်း သိလိုက်ရ
ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်လို လမ်းမသလားချင်တော့ဘူးတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ကပြောတယ်
ခုချိန်ထိ သူ့ကိုယ်သူခါချဉ်ပဲ ထင်နေတာဆိုးတယ် လျှပ်စီးလက်တိုင်း အ၀တ်စတွေကို မှန်နဲ့
ပြေးအုပ်တယ် မနေရဲဘူး စိတ်ရဲ့ ဟိုးအနက်ရှိုင်းဆုံးတွင်းထဲက ချေးညှော်စိုစိစိတွေကို လက်ခုပ်နဲ့
လှမ်းငင်ဖို့အရေး နားဖာကလော်တစ်ချောင်းလောက်တောင် သတ္တိမရှိဘူး ဘယ်လိုအယူအဆလဲ
စကားလုံးတွေ ပျော့တွဲမကျခင် လှေကားထစ်အမှောင် ချောင်ကွယ်မှာ နေလုံးတိမ်ဝင်သွားတယ်
နံရံမှာ အလှကပ်ထားတဲ့ ပင်လယ်က တစ်ခြမ်းပြုတ်ပြီး အခန်းထဲ ရေတွေ ဝေါခနဲဝင်လာကြ
မပြောမဆိုနဲ့ ရုတ်တရက်ကြီး အောက်ဆီဂျင်ကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံတိုးလိုက်တယ်
လူဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရောင်းဈေးက အဆင်သင့်
သတ်မှတ်ထားပြီးသားပဲ အနီတွေ ၀ါထိန်နေအောင် ပြာနေတဲ့ အရောင်နဲ့ ပန်းပွင့်စိမ်းကလေး။ ။
Posted by ဇာဇာ at 9:24 PM No comments:
ဇာတ်သိမ်းတွေ အားလုံး ဒီအတိုင်းချည်းဆို..။
ရေးနေတဲ့ စာကြောင်းကို ချထားလိုက်တယ်..။ ဗိုက်နည်းနည်းဆာ လာလို့…။ ရေသောက်မလို့ လုပ်ပြီး ဆေးပေါ့ လိပ်ထဖွာမိတယ်..။ တတုံတုံနဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ တက်လာတဲ့ ကွန်ပြူတာ စကရင်ကို လှမ်းမြင်ရတယ် …။ မလွယ်ကျောပဲ.. ဟွန်းသံတွေ ခပ်တည်တည် မြည်တတ်တဲ့ လမ်းမဘက်ကို လှမ်းငေး ..။ အနောက်တောင် တိမ်တွေကို လှမ်းငေး..။ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ကိုယ်ပြန်မကြိုက်တော့ရင် .. ဘယ်လိုလုပ်မလည်း .. ဒါနောက်ထပ် စာတစ်ပိုဒ်ထပ် ရေးပြီးတဲ့အထိ နှမျောစိတ်ကို သွန်ချပစ်လို့မရဘူး..။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်မေးဖို့ အခုထက်ထိ အလိုလိုစိုးရွံ့တုန်းပဲ..။ အားပါ့မလား ဆက်သွယ်ရေးပြင်ပတွေ ..။ နောက်ထပ် ကမ္ဘာပျက်ကားတွေ ထပ်ခေတ်မစားခင်အထိ ဘယ်လူမျိုးတွေများ ပြက္ခဒိန်တွေရပ်ထားဦးမှာလည်း. လူဆိုတော့လည်း ခေတ်ရေစီးအလိုက် စိုးရိမ်ကြီးတတ်တယ်..။ ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါ အာရုံတွေ တင်းကျပ် နှောင်ဖွဲ့မိအောင် ညနေကတိမ်တောက်နေတတ်တယ်..။ သဘာဝတရားကြီး သဘာဝကျနေတာကို အပြစ် မပြောချင်ပါဘူး..။ ပုံမှန် မဖြစ်နိုင်တဲ့နောက် တော့ သဘာဝကျကျ အပြစ်တင်တာလေးကို ဒါမှမဟုတ်.. သဘာဝကျကျ ရယ်မောမိတာလေးကို … တစ်ခါတစ်ခါတော့ စပါယ်ကုံးတွေဝယ်ပြီး ဘုရားမှာ ဘာဆုတောင်းရ မှန်းမသိဘူး..။ ခန့်မှန်းခြေ ဒီစကြာဝဠာက ဘယ်လောက်ကြာမှာလည်း သိချင်တာမျိုး..။ လူတွေ ရေမရှိရင် ဘာကို အစားထိုးသောက်သုံးရမလည်း..။ နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်ပြီးရှင်းပြချင် ရှင်းပြနေမိတယ်.. ယုတ္ထိကျလေလေ မယုံကြည်ရလေပဲ.. သေချာလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေက လွဲချော်ခဲ့ပြီးမှန်း အတိအကျပဲလေ.. နေရောင်ခြည်မရရင် ကန္တာရလည်း ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်ရောက်သွားတတ်တယ် ခဲစရာရေမရှိတာက လွဲလို့ပေါ့။ ချထားတဲ့ စာကြောင်းကို ပြန်ရေးဖို့.. ဇာတ်သိမ်းတွေ အားလုံး ဒီအတိုင်းချည်းဆို မတော်တဆ ဖတ်မိတဲ့ လူတွေကို အားနာလို့… သဗေသတ္တာကမ္မသကာ…။
Posted by Friday Endings Poetry Beach at 9:27 PM No comments:
ငါ့ ဇာတ်ကောင်ကို ဘယ်သူသတ်သွားသလဲ (၃)
ရှင် တစ်ခုခုကို ခံစားရတာတွေ ရှိလာရင်
ကောင်းကင်ကြီးကို ငေးငေးကြည့်နေစမ်းပါ ၊၊
အဲ့ဒီမှာ အစိမ်းရောင်တိမ်တွေ ရှိလေ့ရှိတယ် ၊၊
အကယ်၍ ရှင်နဲ့ မကြုံဆုံဖြစ်သေးရင်တောင်မှ
မျှော်လင့်ချက်အေးအေးထားပြီး စောင့်ကြည့်ပေါ့ ၊၊
ကျွန်မတော့ အဲ့ဒါကိုရှင်မယုံကြည်တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ
လို့ ထင်တာပဲ ၊၊ ကျွန်မအနေနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ ကို
အရူးအမူးဖြစ်တတ်တာ ရှင်သတိတရ သိနေမှာပဲလို့
ခန့်မှန်းမိနေတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ
မခံစားရဘူး ၊၊ ပိုက်ဆံဆိုတာ မရှိရင်တော့ ခံစားနေရတဲ့
မိန်းမ လို့ ရှင့်ကဗျာတွေထဲ ထည့်ရေးပေါ့ ၊၊ ကျွန်မဘက်က
ခွင့်ပြုလက်ခံပေးလို့ ရပါတယ် ၊၊ အမှန်တရားဘက်မှာ အခါးဓာတ်
ပိုတယ်တို့ ဘာတို့တော့ ကျွန်မစဉ်းစားပြောကြားတတ်ပါတယ် ၊၊
ရှင်ဟာ တဆိတ်တော့ ရှင်လိုက်နာသုံးစွဲနေတဲ့
ခံစားချက်ဆိုတာကြီးကို ဘိုးတင်လွန်းတယ် ၊၊ ထားပါတော့ ၊၊
ရှင့် ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်ယောက် ယုံကြည်စေချင်တဲ့
ဆန္ဒရှိလာတိုင်း ကျွန်မကို ပြောကြားနိုင်ပါတယ် ၊၊ ကျွန်မမှာ
ရှင့်အတွက် စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးတွေ
ရှိနေပါတယ် ၊၊ ပြီးတော့ ရှင့်ခံစားမှုကြီးကို လူတစ်ဖက်သားက
သိရှိခံစားနားလည်ပေးတဲ့အခါ ရှင်ကျေနပ်မှုကို ရရှိမယ်ဆိုရင်
ဝမ်းသာပေးသင့်ပေမယ့် ကျွန်မဟာ ဘယ်လိုမှ ခံစားရမှာ
မဟုတ်ဘူး ၊၊ ရှင် ကျွန်မကို နာကျည်းပါ ၊၊ ရှင့်ရဲ့ ခံစားမှု အရင့်အမာကြီးနဲ့
နှင်းဆီ၂ပွင့်ပူးတွေ တွေ့တဲ့အခါ ရှင် ခံစား ၊၊ ဝက်ဝံအရုပ်တွေ ဈေးနှုန်းတက်
သွားတဲ့အခါ ရှင် ခံစား ၊၊ ကျွန်မ နာမည်ပေးထားတဲ့ ရှင့်ရဲ့ Password ကို
ရိုက်ထည့်တိုင်း ရှင် ခံစား ၊၊ အံစာတုံးခေါက်မိတဲ့အခါ အပွင့်ကြီးကြီးကျတိုင်း
ရှင် ခံစား ၊၊ အဆွေးသင့် ရုပ်ရှင်တွေကြည့် မိုးရွာတဲ့အခန်းတွေ ပါလာတဲ့အခါတိုင်း
ရှင် ခံ စား ၊၊ အို! အချိန်ရတိုင်း ရှင်ခံစားနေမယ့် အစား ကျွန်မ ကို နာကျည်းဖို့ ရှင့်ကိုယ်
မစွမ်းဆောင်နိုင်တာ ရှင်ဟာ ဘယ်လို ယောင်္ကျားလဲ ၊၊
ရှင် ကျွန်မ ကို နာကျည်းပါ ၊၊ သိပ်ကို ခံစားလိုစိတ် ရှိ
နေရင်လည်း ခံစားပါ ၊၊ နောက်ပြီး ရှင်သိသင့်တယ်ထင်တဲ့
ကိစ္စတစ်ခုဟာ ကျွန်မ ဟာ ရှင်ပြောတဲ့ နှင်းဝင့်ရည် မဟုတ်ဘူး ၊၊
ရှင် ကျွန်မ ကို ဖုန်းမှားဆက်နေတာ ၂နှစ်ကျော်ရှိပြီ ၊၊
ဒါပေမယ့် ရှင် တစ်ခုခုကို ခံစားရတာတွေ ရှိလာရင်
အဲ့ ဒီ မှာ . . . . . . ၊၊ ၊၊
Posted by ဇာဇာ at 9:05 PM No comments:
ချောကလက်တွေဟာ ငါ့ကို လုပ်ကြံ
ငါ တအားခံစားနေရတာပဲ ၊၊
ငါ့ ချီးတွေဟာ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်
ငါ ဘယ်တော့မှ မတွေးမိခဲ့ပါဘူး၊၊
အား! ၊၊ ငါ့ရဲ့ မူလခံစားမှုတွေဟာ
အဲ့ဒီမှာ ငါ့ဝမ်းဗိုက် လစ်ဟာနေမှုဟာ
အခု ဒီလောက် မခံစားခဲ့ရပါဘူး ၊၊
အား ! အား ! အား ! ၊၊
ငါဟာ ငါ့ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကို
အခု ဒီခံစားမှုကြီး ရဲ့
နာကျင်မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလား ၊၊
ငါ့အမေကို ကျေးဇူးနေမိတယ် ၊၊
ငါ တအားခံစားနေရတယ်ကွာ ၊၊
ချီးမညှစ်နိုင်လို့ ချီးတစ်ပြီး သေသွားတဲ့မသာ
တစ်ယောက်မှ မပါဘူး ၊၊
ငါ ရ အောင် ကြိုး စား မှာ ၊၊
ယုံ ၊၊ ၊၊ ၊၊ ၊၊
ညွှန်း - www.myspace.com/isetmyfriendsonfire
Posted by ဇာဇာ at 9:49 PM No comments:
ရေချိုးခန်းထဲ သဲတွေတဖြောဖြော လောင်းချိုးလိုက်တယ်
စည်ပိုင်းနှစ်လုံး တစ်လုံးက ၀ယ်ထားတာ ကြာသေးဟန်မတူဘူး
တစ်ချက်ရှိတာက ထုံထိုင်းနေတဲ့ ရာသီဥတုပဲ နောက်တစ်ချက်က ညာဖက်လက်မောင်း
ရှပ်ထိသွားတယ် အချိန်အတော်ကြာတဲ့ထိ အကြောင်းမပြန်လည်း အကြံတော့မပြောင်းနိုင်ဘူး
ဖားကိုတုလို့ ရိုးရာမပျက်အောင် စွေ့စွေ့ခရုခုန်လို့ အဖြူပေါ်မှာ အပြောက်လေးတွေ
အစက်ကလေးတွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ၀ိသေသဆိုလို့ အိုင်ပျက်ရုံပဲရှိမယ် ရှိမယ်ဆိုတာကလည်း
ပုံထားတဲ့ စကားအရမျှသာပါပဲ အပြောက်ကလေးတွေအောက်မှာ အဖြူခံထားတဲ့
ထူးခြားတဲ့ ငါးကလေး အိုင်ပျက်ထဲက ခုန်ထွက်လာတယ်
ငါးကလေး သစ်ဝယ် ၀ါးဝယ် ဓနိဝယ် သက်ငယ်ဝယ် ငါးကလေး အုတ်ဝယ် သဲဝယ်
ကျောက်ဝယ် ဘိလပ်မြေ၀ယ် လိုအပ်တာမှန်သမျှအကုန်ဝယ် သူခုန်ထွက်လာတဲ့
အိုင်ကို ပြင်တယ် အို ငါးကလေး
ချိတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ မနက်မနက်ဆို အမြဲစောင်းနေတယ်
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ပယောဂလား ပုဏ္ဏကတိုက်တာလား
မှုတ်ခဲ့တဲ့ ဖယောင်းတိုင်က လူမရှိတဲ့အချိန်မှာ ပြန်တောက်လောင်နေတယ်
ဘောင်ထဲက ကြောင်များ အကောင်ဗလောင်များ ပုစဉ်းရင်ကွဲများ တစ်ချိန်လုံး တစီစီ
အော်မြည် အပြင်မထွက်နဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်၊ ခင်ဗျားကို လူတွေလိုက်ဖမ်းနေကြတယ်
ပုလင်းအောက်ခြေထိ လက်ကို ရသလောက်နှိုက်ပြီး ဆေးပေမယ့် မမှီမကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်
သုံးမရတဲ့ သံလိုက်အိမ်မြှောင်အစား အသုံးကျမယ့် သံလိုက်တောက်တဲ့က တောက်တဲ့
တောက်တဲ့ တောက်တဲ့ တောက်တီးတောက်တဲ့ အင်ဂျတန် အတန်အတိအင်ဂျတိ သီးသီး
ရွှေတောင် မိရွှေတောင် ရွှေတောင်တစ်ဖက် လက်ဝါးတစ်ဖက် အား ရှပ်ထိထားတဲ့ ညာဖက်
လက်မောင်းက ဆစ်ခနဲ နာတယ် နှာတစ်ချက်ထိုးချေတယ်
ဦးထုပ်ကို ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်းပြီး လမ်းတစ်ဖက်ကို သတိထားကူးတယ် လမ်းအဆုံးမှာ
ကာဆာကို အသာဖိထောက် တစ်ပြင်လုံးကော်ပီကူး ပေ့စထ်ချလိုက်တဲ့နေရာက
ငါးကလေးခုန်ထွက်လာတယ် အို ငါးကလေး
ကျောက်ကြိုကျောက်ကြားထဲ အမြီးကလေးလှုပ်ကာလှုပ်ကာ အစာတောင်းတတ်တာ
အဲသလို မီနူးပေါ်မှာ ဈေးနှုန်းရေးမထားတဲ့ အပြုံးများဟာ
အကောင်းဆုံးအကွက်အကွင်း ဘာတဲ့ ကြွချီတော်မူခဲ့ပါလားတဲ့
ဟေ့လူ ခင်ဗျားအသုံးအနှုန်းဆင်ခြင် လူကို ခွေးခေါ်သလို လာမခေါ်နဲ့
ခလုတ်ကိုခပ်ဆတ်ဆတ်နှိပ်ပြီး ထီးရွက်တွေအကုန် ဖွင့်ပစ်လိုက် သဲစက်တွေ
တ၀ုန်းဝုန်းရွာကျမလာခင် တစ်ကိုယ်လုံးပတ်တီးအဖွေးသားနဲ့ အားလုံးရဲ့ကြားမှာ/
မံမီဟာ တစ်ကောင်တည်း တိတ်ဆိတ်အထီးကျန် ကြောက်လန့်အားငယ်မှုများစွာနဲ့ ခန္ဓာပေါ်
စိုရွှဲနေတဲ့ သဲစက်တွေတဖြောဖြောခါထုတ်ရင်း သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်နဲ့အတူ
ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ယာယီအားဖြင့်နေထိုင်စဉ် အပြင်မှာလှမ်းထားတဲ့ ရေတံခွန်ကို
ရုပ်ဖို့မေ့သွားလို့ တစ်ညလုံး သဲကျသံတွေ အဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်
ငယ်ဘ၀ဖိုင်တွဲတွေပြန်စီရင်း စာရွက်စာတမ်းတွေကြား ညှပ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတစ်ဖက်
အခုထိ ကြည်ကြည်လင်လင်မြင်နေရသေးသမို့ ပြန်ကောက်တပ်လိုက်တာ
ကမ်းစပ်ဆီ သံဆူးကြိုးခွေတွေ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက် ခုံးမောက်လှိုင်းကြွ
အဖြူရောင်လက်လက်ထ ဝေါခနဲ နီးလာလိုက် ဝေးသွားလိုက် ဖိတ်အင် ဖိတ်အောက်
တစ်လှည့်စီပြ ဦးစားပေးဖော်ပြရမည့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များအတွက် (ဥပမာ-ဇာတ်လမ်းအမည်၊
၀တ္ထု၊ဇာတ်ညွှန်း၊ဒါရိုက်တာ၊အဓိကဇာတ်ဆောင်များ) တစ်ခုစီ တစ်ခုစီ စာတန်းထိုး
ထိုသို့ဖြင့် ရောက်ရာအရပ်ကနေ အားလုံးကို ကော်/ကလော်ဆဲ အားရအောင်ဆဲပြီးရင်
လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်စလုံး လိုသလိုသုံး လောက်စာလုံးလုံးပြီး သဲနဲ့သာ ဗိုက်ထဲမျှောချပစ်
ကျောရိုးထဲ စိမ့်သွားတယ် နောက်ကျောမလုံတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပဲ လူတွေနဲ့အတူတကွယှဉ်တွဲ
ဲနေထိုင်ရတာ ထင်သလောက်မလွယ်မှန်း မံမီနဲ့သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် ခုတော့သိပြီ
ဘာပဲလုပ်လုပ် ညဖက်စောစောပြန်ရမည် အို...ငါးကလေး ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်။ ။
Posted by ဇာဇာ at 9:50 PM No comments:
Posted by ဇာဇာ at 10:01 PM No comments:
Je suis un poème.
Én egy verset.
Aku sebuah puisi.
Ek is 'n gedig.
Unë jam një poemë.
Poema bat naiz.
Аз съм едно стихотворение.
Jo sóc un poema.
Ja sam pjesmu.
Já jsem báseň.
Jeg er et digt.
Ako ay isang tula.
Είμαι ένα ποίημα.
Mwen se yon powèm.
Ég er ljóð.
Tá mé dán.
Io sono una poesia.
Es esmu dzejoli.
Јас сум една песна.
I amapoeżija.
Eu sou um poema.
Sunt un poem.
Ја сам песму.
Ja som báseň.
Jaz sem pesem.
Yo soy un poema.
Jag är en dikt.
Ben bir şiir duyuyorum.
Yr wyf yn gerdd.
ngar har kabyar 1pote pot.
Rap etop at rayb ak rah wan ayk.
Posted by Friday Endings Poetry Beach at 9:20 PM No comments:
Now Availble အပေါက်ကြီး
ငယ်ငယ်တုန်းက ရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့ သိမှုကိစ္စဟာ နေရာမှာ အပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်
အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်တော့ နှင်းဆီတစ်ပွင့် စားပွဲပေါ်မှာ
မှတ်ထား ဒါ(သေဖို့)နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး နောက်ဘယ်တော့မှ ထပ်မရှင်ချင်တော့နဲ့
ဟာလာဟင်းလင်းပန်းအိုး ကြမ်းပြင်တစ်လျှောက် မလှုပ်မယှက်ပိုးဟပ်အရွယ်စုံများ
အပေါက်ကြီးထဲ ရင်သားသုံးမွှာရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပုံ ခဲတံနဲ့
အသွေးအသားများယားယံကာစအရွယ် နံရံတွေကို လက်သည်းချွန်ချွန်တွေသုံးပြီး အားပါးတရ
စကားလုံးတွေ အစိုက်ခံရ ဟာလာဟင်းလင်းအပေါက်ကြီးထဲ အနမ်းတစ်ပွင့်ပျိုးတယ်
အချိန်မရွေး စီးကရက်မီးခိုးငွေ့တွေ မွှန်လာနိုင်သလို ဟိုဖက် ဒီဖက်
ထူပိန်းပိန်းအရောင်သုံးထားတာ ဦးထုပ်လျှာက လေတိုးတော့ ဖပ်လပ်ဖပ်လပ်နဲ့
မြင်လို့လည်းမကောင်း ဘာတစ်ခုမှ ဆက်စပ်ယူလို့လည်း မရတော့ဘူး အင်နာဂျီကို
မကောင်းမှန်း မကောင်းတကောင်းမှန်း မကောင်းမကောင်းမှန်း
ကောင်းကောင်းမှန်း မှန်းတတ်လာတယ် ငယ်ရည်စား
ရေးပြီးသားပုံပြန်ဖျက်ပြီး လိပ်တစ်ကောင်ပုံနဲ့ အပေါက်ကြီးကို ဖာကြည့်တယ် အာပလာပဲ
ငယ်ဘ၀အရိပ်တွေဟာ အဲဒီ့ ထူပိန်းပိန်းအပေါက်ကြီးထဲ မကြာခဏ သိမှုခြေတစ်ဖက်ကျွံကျွံကျ
သြော် ကန်ဂျာနယ်လစ်တွေပြောပါတယ် အကော်အဖွကောင်းချက်များ
သမ္မတတောင်ဖြစ်နေပြီ မွေးစာရင်း ကွဲပြားဖို့ အရေးတကြီး ခွင်ကျယ်နေကြ
အီဖေကိုတို့များ ငယ်ဘ၀နောက်ကြောင်းနေရာအပေါက်ကြီးထဲ ကွမ်းတံတွေး
သေးကော့ပန်း လိုပန်း ပြီးသွားရင် ကျောပြင်လေးအသာတွန့်ပြီး ဖလူးဖလန်းနဲ့
တဆတ်ဆတ်တောင်ခါလိုက်သေး တစ်စက်စက် တစ်စက်စက် နောက်ဆုံးတစ်စက်
စံပယ် ခရေ နှင်းဆီ ဒေါန မြတ်လေး ကံ့ကော် ပိတောက် ဆိတ်ဖလူးနဲ့ တရုတ်စကား ကုလားစကား
အင်္ဂလိပ်စကားတွေ အချစ်ဦးနောက်မြီး သီတွဲပေးခဲ့တဲ့ နှောင်းအတိတ်အပေါက်ကြီးဟာ
ငယ်ရုပ်ဖမ်းမရလို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရတာ မွေးနေ့တိုင်း အင်္ဂါထောင့်မှာ သက်စေ့ပါပဲ
ဆုကြေးငွေ ဘယ်လောက်ထုတ်ထုတ် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့တော့ (
ချောင်ကလောင်ထက်သာတဲ့ တစ်နေရာမှာ အသက်စေ့သလောက်နေထိုင်သွားနိုင်ပါသည်
ငကန်းဘင်လာဒင်သေတော့ ငစွေဘင်လာဒင်လာဦးမည် ပုံထဲကအတိုင်းဆို
ထောင်ဖောက်ထွင်းရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ သစ်သားလက်ကိုင်တူတစ်လက်ကို
အကျဉ်းသားက သမ္မာကျမ်းစာထဲ အပေါက်ဖောက်ပြီးဖွက်ထားခဲ့တယ်
(ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ အာမင်) မိုးဦးမကျတကျ တွင်းပေါက်ထဲက
ကြားနေနိုင်ငံများအနေဖြင့် အားထုတ်လုပ်ဆောင်မှုတွေရဲ့ ဦးတည်ချက်တိုင်းဟာ
ချုပ်သီမပေးလိုသောကြောင့်ပဲလား အချက်အလက်တွေအရ ၂၀၀၂ခုနှစ်တုန်းက
စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ပြင်သစ်ပိုင်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်း
သင်္ဘောနံဘေးအပေါက်တစ်ခုဖြစ်သွား ဖြစ်သွား ဖြစ်သွား သက္ကရာဇ်တွေသာကြီးရင့်လာတယ်
မျှော်လင့်ချက်ဖားတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် အစပြုခုန်ခုန်ထွက်ကျနေတတ်တဲ့ ဒီမြေဒီရေဟာ
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကံကြမ္မာအိတ်ပေါက်များဖြစ်နေမလား။ ။
Posted by Friday Endings Poetry Beach at 9:49 PM No comments:
ဖုန်မှုန့်လေး တစ်မှုန်ကို ယုံကြည်သူပေါ့ ၊၊
ထပ် ပြော မယ် ၊၊
မသိသူ (ကျော်သွားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ရုန်းကန်နေကြ)
ဟာ ငါပေါ့ ၊၊
ပြီးတော့ ငါ နားထောင်တယ် ၊၊
ငါ နားထောင်နေတယ် မကြားသလိုနေပေးပါ ငါ့ကို ၊၊
ငါ့ဆီက | ငါ့ကို | ရိတ် ပစ် ပါ ၊၊ | မပြောခင် ၊၊
ငါ့ ရှင်သန်မှု ဟာ သိန်း သန်း ချီ တန် နေတယ် ၊၊
ဆက်ပြီး ငါနားစွင့်တယ် ၊၊
နားစည်ကို တကျွိကျွိဖြစ်စေတယ် ၊၊
အဲ့ဒါ ငါကြားရတဲ့ စကားမပီတဲ့ရေဒီယို (သတ္တိမကြွတာကံကောင်း)
ငါ့ကို ကြားရလား ၊၊
ငါ ထုတ်လွှင့်နေတယ် ၊၊
ငါ ညွှန်းဆိုနေတာ စစ်ပွဲတွေအကြောင်းပေါ့ ၊၊
စစ် ဆိုတာ တကယ်မရှိဘူး ၊၊
ငါ့ကို သေချာနားထောင် ၊၊
ဘာမှ သေချာမှုမှ အာမခံမှ မရှိတဲ့ အစိုင်အခဲတစ်ခုနဲ့
ဘာမှ ဘာသေချာမှုမှ ဘာအာမခံမှ မရှိတဲ့ အစိုင်အခဲတစ်ခုနဲ့
ရှဲ | | | | | | | | |
ဘယ်လောကမှာမှ နေရာလွတ်ဆိုတာ မရှိဘူး ၊၊
အဲ့ဒါ စက်ရုပ်သံပေါက်နေတဲ့ ရေဒီယိုရဲ့
ဒါပေမယ့် ငါဟာ ငြိမ်းချမ်းသူ တစ်ဦးပေါ့ ၊၊
ငါ ပိုင်တဲ့ ဒိန်ခဲကြီး မပျောက်ရှခင် ၊၊
ငါ့ လျှာပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ တွန်းမတင်ကြခင် ၊၊
ငါ့ဆန္ဒတွေ ရှိရှိသမျှ စစ်ပွဲတွေအပေါ် မထုတ်ပြခင် ၊၊
ငါ့လျှာတွေ ဒိန်ခဲကြိုက်တဲ့ ဆန္ဒ
အဲ့ဒီကတည်းက ငါပြောနေတာ ၊၊
ငါ နားစွင့်နေတာ ၊၊
ငါ စောင့်နေတာ ၊၊
ရုန်းကန်နေတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ၊၊
မြန် မြန် နင်း ကြ ပါ တော့ ၊၊ ၊၊
Posted by Friday Endings Poetry Beach at 8:49 PM No comments:
ကဗျာ နဲ့ မာဖလာ
ကဗျာနဲ့ မာဖလာဟာ ဈေးထဲမှာအမှတ်မထင်တွေ့ခိုက်
ညည်း နေကောင်းလား ပုံစံဆန်းသစ်ရဲ့လား
လေးနှစ်ခန့်ကြာသောအခါ ကဗျာမှာ ကိုယ်ဝန်လေးရှိလာပြီး
၁၆နှစ် ၁၇နှစ်နှစ် မရိုးတို့မရွတ မြီးကောင်ပေါက်
အရွယ် အရူးအမူး ခူးဆွတ်စားချင်စိတ်ကအရမ်းများ
ပြီး ဘယ်သူလိင်ကိစ္စနဲ့ မလွတ်ကင်းနိုင်
ပြန်တွေ့ကြတော့ အကြီးကြီးနဲ့စောက်ကျိုးနည်း ပြောင်းလဲ
ဖန်တီးမှုမျိုး ထပ်မံတွေ့ဆုံကြ မှတ်မိကြရဲ့လား
story တစ်ခုလုံးမှာ ပြဿနာတွေတစ်ချိန်လုံးလှိမ့်တက်
နေပြီး တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေတာမျိုး tempo ကို
လျှော့ချပစ်လိုက်တာ Nolan ရဲ့ကိုင်တွယ်နိုင်နင်းပုံ
မျိုးနဲ့ ကဗျာနဲ့မာဖလာကို သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတယ်
ရာသီဥတုနဲ့ မစပ်ဟပ်တာတွေ သွားလာ
မာဖလာရဲ့ လင်ယူသားမွေး အပျော့ဆွဲ
တီဗွီထဲလည်း ကြေငြာ ဘေဘုတ်လည်းထောင် အထူးဘတ်စ်ကားတွေပေါ်လည်း
ထုတ်လွှင့်။ ဆိုကြ လည်ချောင်းကိုတောင် ချွတ်ဆိုကြ နင့်အမေကလွှားထဲမှပဲ။
တံတွေးထွေးသံဟာ နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲ ကန့်လန့်ခံပြီး တင်နေတယ်။ မီးရောင်လို
အမှိုက်လို။ စပွန်ဆာဆိုတာကလည်း ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိလို့ ဆင်ကွယ်ရာရှာရတဲ့ ဓာတ်ပြုမှု။
ဘာနဲ့စားမလဲ ဆရာ ငါးနဲ့လား ခြောက်ဒဿမသုံညတစ်နဲ့လား ဒါမှမဟုတ် ဆူနာမီနဲ့လား။
ရးကျမ်းဆို ခြကသိပ်ကြိုက်။ သစ်ခွပန်းလေးလည်း
ရင်တစ်ခြမ်းတုန်နေတယ်။ ကျောသားရင်သားခွဲခြားမရတာဆိုလို့ ကြက်ဥနဲ့ဘဲဥပဲရှိထင်။
ကဲပါ ရှက်မနေပါနဲ့ ကိုယ်ပေါ်ရှိတဲ့ အ၀တ်အစားအကုန် ထိုးသာဟောင်ပြစမ်းပါ။ ဂလုဂလု
ဂလု။ ခင်ဗျားအာဘော်က ပုတ်စော်နည်းနည်းနံ။ လောလောဆယ် ခင်ဗျားလက်ဝါးကြီး
အုပ်ဖို့ခက်နေသေးရင် ကျွန်တော့်လက်ဝါးကြီးခဏယူသုံးလေ။ စောက်ရမ်းများတဲ့
ပုရွက်ဆိတ်တွေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖုံးအုပ်ပစ်တော့မယ့်အတိုင်း တရွရွ။
တံစက်မြိတ်လေ တစ်လျှိုလုံးကို တိုးလှုပ်လွင့်နော့မယ့်အတိုင်း တမမ။ ဇွန်းဆိုဒ်စုံ
ခရင်းဆိုဒ်စုံ မတ်ရပ်အနေအထားနဲ့ ခွန်းကြီးခွန်းငယ်ထဲ ရေနွေးများများ
လောင်းသွန်ချ။ ကပ်ကြေးတစ်ကိုက်စာအကွာကနေ အဲဒီ့အနံကို ရရုံနဲ့ အဲဒီ့အမျိုးအစားမှန်း
တန်းနေအောင် မှန်တယ်။ ရယ်ဒီမိတ်ဘ၀ ရယ်ဒီမိတ်အလှ ရယ်ဒီမိတ်အက စောက်ရေးထဲ
ကာရန်တွေက တစ်မှောင့်။ ဆွဲဖြဲဖို့အတွက် ဖြတ်ရာလေးပေးထားတယ်။ ကန်စွန်းရွက်လို
သင်ပါ။ သင်မပါဘဲနဲ့တော့ ကျွန်ုပ်လည်း ကြက်သွန်လို အနွှာမခံနိုင်။
ပြီးတိုင်း စိတ်ထိခိုက်နေရဦးမှာပဲ။ အထုပ်သစ် ဒီဇိုင်းသစ် အခွံမာ
ခွန်းရဖို့အတွက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အပူစွမ်းအင် ဘယ်ဂလောက် အာပေါက်အောင် ပြောရ
ဆိုရမလဲ။ ဆိုကြ ကြေငြာစာသားအတိုင်း ထပ်ဆိုကြ။ မဖြစ်ချေဘူး။ ကာမီကာဇီနည်းနဲ့ပဲ
အခန်း(၁)ကို စဖွင့်ရတော့မယ်။ ညညအိပ်မပျော်မှာ ကြောက်သူ။ ။
Posted by Friday Endings Poetry Beach at 10:04 PM No comments:
ကျွန်တော့် မျက်ကြည်လွှာပေါ်က သံတိုင်တံဆိပ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ခင်ဗျား နားလည်လား ၊၊ မမ ခင်ဗျားကို သောကြာနေ့ ညဘက်တိုင်း ဖုန်းခေါ်ဖြစ်တယ် ၊၊ ကျွန်တော့်ဆီက ထွက်ပြေးဖို့ပဲ ခင်ဗျား အသုံးပြုနေတဲ့ ခင်ဗျားမျက်လုံးတွေ ၊ ခင်ဗျားခြေထောက်တွေ ၊ ခင်ဗျား တတ်ကျွမ်းတဲ့ မှော်ဘုရင်မအက်တင် တွေ ၊၊ လျှပ်စီးတွေ လက်တဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်သတိအရမိဆုံး ခင်ဗျားရဲ့ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ မျက်တောင်အတုတွေ ၊၊ ခင်ဗျားရဲ့ မျက်ရည်စီးကျလာပုံကအစ ကဗျာဆန်တယ် ဆိုတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ ကျွန်တော် သုတ်သင် ပစ်ချင်မိတုန်းပဲ ၊၊ အနုပညာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ ဝမ်းနည်းငိုကြွေးနေပုံလား ၊၊ အနုပညာ ဟာ ခင်ဗျားရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ မျက်နှာထားလား ၊၊ အနုပညာဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အချိန်မအားလပ်မှု လား ၊၊ အနုပညာဟာ ခင်ဗျားရနေတဲ့ ရိုသေလေးစားခံရမှု လား ၊၊ အနုပညာဟာ ခင်ဗျားကို လိုအပ်နေတဲ့ လက်ထပ်လက်စွပ်တွေလား ၊၊ ခင်ဗျားဆီ ဖုန်းခေါ်တိုင်း ခင်ဗျားမရှိဘူး ၊၊ နံရံတွေဟာ ခင်ဗျားအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲ ၊၊ ငွေစက္ကူတွေအပေါ်အမှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်တောင်မွှေးတွေကို ရိုက်နှိပ်ဖို့ ဘယ်သူစိတ်ကူးလဲ ၊၊ ခင်ဗျားဟာ အနုပညာပဲ ၊၊ ခင်ဗျားဟာ အပြစ်မဖြစ်အောင်လိမ်လည်ထားတဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက်တစ်ခုပဲ ၊၊ အဲ့ဒီညက ခင်ဗျားမွေးနေ့မှာ ကြယ်နှစ်ဆယ့်ရှစ်ပွင့်တိတိ တပြိုင်ထဲကြွေရင် ဘယ်လိုအရူးတွေက ဘယ်လိုဆုတွေ တောင်းမလဲ စိတ်ကူးကြည့်တယ် ၊၊ အခုချိန် ဘေးနားမှာ သူတစ်ပါးရှိနေဖို့ ဆန္ဒရှိတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေပစ်လိုက်ဖို့ ပဲ သင့်တော်သလား ၊၊ အခုချိန် ခင်ဗျားရဲ့ ဟန်ဆောင်မှု မှာ သူတို့ ပျော်နေမှာ ၊၊ ဝမ်းနည်းနေမှာ ၊၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ခင်ဗျားကို ငေးနေမှာ ၊၊ ခင်ဗျား ဟာ အနုပညာပါပဲ ၊၊ ဖုန်းကိုင်ပါ မမရယ် ၊၊ ခင်ဗျားအတွက် စိုက်ထားတဲ့ နှင်းဆီပင်ဟာ ရုပ်ရှင်ထဲကလို မရှင်သန်ကြောင်းပြောတဲ့အခါ ခင်ဗျား ရယ်မောစေချင်လို့ ၊၊ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းတာ တစ်ခုက လူကြိုက်များလေ့ရှိတဲ့ လွမ်းစရာကိစ္စတွေကို ခင်ဗျားဟာ တိတ်တခိုး ဟားတိုက်ပစ်လေ့ရှိတာ ကျွန်တော် သိနေတာပဲ ၊၊ ကျွန်တော်ဟာ မင်းသမီးတစ်ယောက် ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် လို့ ပြောတဲ့အခါ သူတို့ရှေ့မှာ ကြယ်ကြွေရင်ဆုတောင်းတဲ့ အရူးဟာ ကျွန်တော်ဘာလို့ ဖြစ်သွားတာလဲ ၊၊ “ယုံကြည်မှု ဟာ ရူးနှမ်းခြင်းပဲ’’ ၊၊ မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်တွေ နဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ စကားပြောခန်းတွေ ကို တအားသတိရတာပဲ ၊၊ တဆိတ်လောက် ဖုန်းကိုင်ပါလား မမ ၊၊ ကျွန်တော် ရှင်းပြတာကို ဘာလို့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို နားမထောင်ပဲ နေနေရတာလဲ ၊၊ မမ လက်ခံလိုက်တဲ့ လက်ထပ်လက်စွပ်ဟာ ဘယ်သူလဲ၊၊ မှိန်သွားတဲ့ အလင်းရောင်ဟာ ရိုလာကိုစတာကြီး ကြောင့်ပဲ ၊၊ ဓာတ်ကြိုးတွေဟာ သေနေတဲ့ မြွေတွေ ၊၊ သရဲငကြောက်တွေ ကျွန်တော့်ကို အုပ်စုဖွဲ့ခြောက်လှန့်လွှတ်လိုက်ကြ ၊၊ အငွေ့ကို စားသုံးနေတာ ကျွန်တော်ဟာ ဒုက္ခနဲ့ တည့်တည့်က နတ်သားပဲ ၊၊ လူတွေ လောင်နေတဲ့ မီးကို အော်ဟစ်ရယ်မောနေကြ ၊၊ ရင်ထဲက မီးတောင်လေး ပေါက်သွားပြီ ၊၊ လက်ကောက်ဝတ် ဟာ လှီးဖြတ်ချင်စရာ အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလား ၊၊ ရိုလာကိုစတာ ဟာ ပေါကြောင်ကြောင်ကြီး ပဲ ၊၊ ကျွန်တော် ဆက်နေတဲ့ ဖုန်းကို ဒီတစ်ကြိမ် အသိအမှတ်ပြုပါ မမ ၊၊ ခင်ဗျား ဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ကျွန်တော် သောက်ချင်တယ် ၊၊ သောကြာနေ့ ၊၊ ခင်ဗျားဟာ မက်မောဖို့ကောင်းတယ် ၊၊ ခင်ဗျားဟာ သိပ်လှတယ် ၊၊ ခင်ဗျားဟာ အနုပညာပဲ မမ ၊၊ လက်ထဲက ဆေးပေါ့လိပ်ဟာ မောင်းချဓားဖြစ်သွားတယ် ၊၊ ကမ္ဘာပေါ်က သတို့သမီးဝတ်စုံတွေကို ဘယ်သူမုန်းတီးလဲ ၊၊ ခင်ဗျားမှာ ရဲရင့်တဲ့ သွေးတွေ ရှိနေလို့လဲ ခင်ဗျား သိပ်လှနေတာပဲ ၊၊ ဖုန်း
မမ ရယ် ၊၊ ခင်ဗျား ဟာ ဘယ်တော့မှ ၊၊ ဖုန်းကိုင်ပါ မမ ၊၊ သေမသွားနိုင်တဲ့ . . . . ၊၊ ဖုန်းကိုင်ပါ မမ ၊၊ စုန်းမတစ်ယောက် မဟုတ်လား ၊၊ ဟ ယ် လို ၊၊ ဖုန်း
မမ ၊၊ ပန်းချီကားတွေဟာ အပေါ်က သံတိုင်ထပ်ထားပြီး ကြည့်မှ ပိုလှတာ ၊၊ သိလား မမ ၊၊ ဖုန်း ကိုင် ပါ ၊၊ ဟယ် လို ၊၊ ၊၊
ညွှန်း ၊၊ ၊၊ မောင်သိန်းဇော် ( ဒုက္ခနဲ့ တည့်တည့်က နတ်သား )
Posted by ဇာဇာ at 5:16 PM No comments:
နှလုံးသားက အဲဒီ့အရာကို အကြိမ်တစ်သောင်းမြောက် သွားကန်ကျောက်မိတယ် ဘယ်မူလီနဲ့ သွားကျပ်လို့ အထာကျနိုင်တော့မှာလဲ ကမ္ဘေ ကမ္ဘာက အရှုပ်ထုပ်တွေ လူကုန်...
တွန့်ခွေခွေ စွတ်ကြောင်းရာအတိုင်း နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲ မီးတောက် ပြာနှမ်းနာကျင်ခဲ့ရတယ် ဟင်းလင်းပြင်ကျယ်ပန်းချီကားထဲ သစ်ပင်နည်းနည်း တောင်နည်းနည်း တ...
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ မနေ့က အဖြစ်အပျက်တွေဆီ ငါ့ကို ဖုန်းလှမ်းခေါ်ခွင့်ပြု ထုံးစံအတိုင်း ရထားတစ်စင်း တဂျုန်းဂျုန်...
သူ ဂေး တဲ့။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ဂေး ၊၊ အော်ဇီ လွှတ်တော် အမတ် မ တယောက် က I'm op...
ဘယ်လမ်းက သွားသွား ဟင့်အင်း ကိုပဲ ရောက်မယ့် ၊၊ မြေပုံလမ်းညွှန်တွေ လေထဲ လွင့်နေတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကလေထဲ လွင့်နေတဲ့ ...
Third Party Poem (20)
FEPB II.0. Simple theme. Powered by Blogger.